သိပ္ပံနည်းပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်သော နည်းလမ်းကောင်းများ။ – SoShwe
Samsung ရဲ့ အမိုက်ဆုံး ၊ အကြမ်းဆုံး Live Sale
Samsung Myanmar ရဲ့ ငွေသားလက်ဆောင် (၃) သိန်းအထိ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မယ့် Promotion အစီအစဉ်။
YouTube သုံးစွဲခွင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့နိုင်ငံများ။
TikTok ကို App Store တွေကနေ ဖြုတ်ချတော့မှာလား ? ? ?
အိမ်မှာနေရင်း အိမ်အသစ်ရှာဖွေခြင်းကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၃) ခု။
အိမ်တစ်အိမ်ဝယ်ယူပြီး ဝယ်ယူခဲ့တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ (၅၅၀%) အထိ မြင့်တက်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ဦး။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဝယ်ယူသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ သိထားသင့်တဲ့အချက်များ။
အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွက် ဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခု။
ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်လာနိုင်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဈေးကွက်အသစ်တစ်ခု။
အဝတ်အစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျားမခွဲခြားမှုမရှိကြောင်း (၄) နှစ်တိုင်တိုင် သက်သေပြခဲ့သည့် အမျိုးသား။
ချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့ကလေးငယ်တွေကို စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အသက် (၉)နှစ်အရွယ်ကောင်လေး။
အိပ်နေရင်း ဟောက်တတ်သူတွေအတွက် ဟောက်တာကိုရပ်တန့်ပေးမယ့် ဆေးဝါးအသစ်။
Demi Lovato နဲ့ Selena Gomez တို့အကြား ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ။
Home/Health & Beauty/သိပ္ပံနည်းပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်သော နည်းလမ်းကောင်းများ။
သိပ္ပံနည်းပညာအရ လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်သော နည်းလမ်းကောင်းများ။
admin February 22, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
သားသားမီးမီးတို့အတွက် Ovaltine ရဲ့ Smart Book App
တစ်ချို့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ “ နနွင်းမှုန့်မှာဆိုရင် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ နနွင်းမှုန့်ဟာ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်ခဲနာကျင်တာကို သက်သာစေပြီး နှလုံးကိုလည်း ပိုမိုကျန်းမာစေပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး Palinski Wade မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူကပဲ “ အသားအရေဖူးရောင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်းတို့ဟာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး နနွင်းမှုန့်ဟာဆိုရင် ထိုသိုု့သော ဒဏ်ရာအနာတရတွေကို လျော့နည်းသွားအောင်၊ ပပျောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်. . .” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ နနွင်းမှုန့်မှာပါတဲ့ Anti-Oxidant တစ်မျိုးဟာ လူတွေရဲ့ အချိန်သက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး သိရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဟင်းချက်ရာမှာ သကြားနဲ့ ဆားကိုပဲ မသုံးဘဲ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သစ်ကြံပိုးခေါက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ Insulin ဓာတ် မြောက်မြားစွာပါသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သကြားဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပုံမှန် စားသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီဓာတ်ကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်. . . ” ဆိုပြီး Palinski Wade မှ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဆေးလိပ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို အထွေအထူး ရှင်းပြစရာ မလိုလောက်အောင် သိထားပြီးလောက်ပြီဖြစ်မှာပါ။ “ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး Dr. Jani မှ ရှင်းပြထားပါတယ်။ Centers for Disease Control & Prevention ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ အမေရိကန်မှာ နှလုံး၊ အဆုတ် ရောဂါကနေ နောက်ဆုံး ကင်ဆာဖြစ်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ဆေးလိပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ “ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အသက်တိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေသာမက သွေးကြောတွေကိုပါ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး Dr. Jani မှ ရှင်းပြထားပါတယ်။
အရက်ကို သင့်တင့်မျှတစွာ သောက်ပါ။
အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးပါက နှလုံးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း (အထူးသဖြင့် ဝိုင်နီကို) သင့်တင့်မျှတစွာ သောက်မယ်ဆိုရင် အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ ပုံမှန်သောက်သုံးသူတွေဟာ (အမျိုးသမီး – ၁ခွက်နဲ့ အမျိုးသား ၂ခွက်) နှလုံးသွေးကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကနေ သေဆုံးနိုင်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ “ ဝိုင်အနီမှာဆိုရင် Resveratrol လို့ခေါ်တဲ့ Antioxidant တစ်မျိုး ပါဝင်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး Koma မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး Palinski Wade မှ “ ဝိုင်နီဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် အထောက်အကူ ပြုရုံသာမက နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အသားအရေ ဖူးရောင်နီရဲခြင်းတို့ကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ် . . .” ဆိုပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လက်တလောပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ငရုတ်သီးစားတဲ့သူတွေဟာ မစားတဲ့သူတွေထက် (၁၃) ရာခိုင်နှုန်း သေးဆုံးနိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုတော့ သက်သေပြထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ Palinski-Wade က “ ငရုတ်သီးဟာ သွေးဖိအားကို လျော့နည်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့် ငရုတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ Capsaicin ဓာတ်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ သွေးဖိအား မြင့်မားခြင်းကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ စိတ်မမှန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငရုတ်သီးကို ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဒီလိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတွေကို လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေတာဟာ ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိုးဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင် နေထိုင်နိုင်ဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေကို ရေရှည် ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အချိန်မတန်ဘဲ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခြားတွေ့ရှိချက်တွေအရ စိတ်ဖိစီးနေသူတွေဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ေစေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင် Dr. Jani က “ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို များပြားစေပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ သွေးဖိအားကို မြင့်တက်စေခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ ပုံမှန်မရှိခြင်းနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် . . . ”ဆိုပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိသူတွေဟာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
သိပၸံနည္းပညာအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားတဲ့ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား။ (အပိုင္း – ၂)
တစ္ခ်ိဳ႕ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ “ နႏြင္းမႈန္႕မွာဆိုရင္ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္တ့ဲ ဂုဏ္သတၱိေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။ နႏြင္းမႈန္႕ဟာ အရိုးအဆစ္ေတြ ကိုက္ခဲနာက်င္တာကို သက္သာေစၿပီး ႏွလုံးကိုလည္း ပိုမိုက်န္းမာေစပါတယ္ . . . ” ဆိုၿပီး Palinski Wade မွ ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သူကပဲ “ အသားအေရဖူးေရာင္ျခင္း၊ နီရဲျခင္းတို႕ဟာ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို အရွိန္ျမွင့္ေပးၿပီး နႏြင္းမႈန္႕ဟာဆိုရင္ ထိုသိုု႕ေသာ ဒဏ္ရာအနာတရေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္. . .” လို႕ ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ နႏြင္းမႈန္႕မွာပါတ့ဲ Anti-Oxidant တစ္မ်ိဳးဟာ လူေတြရဲ႕ အခ်ိန္သက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သိရွိရပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဟင္းခ်က္ရာမွာ သၾကားနဲ႕ ဆားကိုပဲ မသုံးဘဲ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သစ္ႀကံပိုးေခါက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ သစ္ႀကံပိုးေခါက္မွာ Insulin ဓာတ္ ေျမာက္ျမားစြာပါသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း သၾကားဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ပုံမွန္ စားသုံးမယ္ဆိုရင္လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆီဓာတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္. . . ” ဆိုၿပီး Palinski Wade မွ ဆက္လက္ရွင္းျပခ့ဲပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႕ ေဆးလိပ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို အေထြအထူး ရွင္းျပစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ သိထားၿပီးေလာက္ၿပီျဖစ္မွာပါ။ “ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တယ္ဆိုရင္ သူ႕အေနနဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အရင္ဆုံးျပဳလုပ္ရမယ့္အရာကေတာ့ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္ . . .” ဆိုၿပီး Dr. Jani မွ ရွင္းျပထားပါတယ္။ Centers for Disease Control & Prevention ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအရ အေမရိကန္မွာ ႏွလုံး၊ အဆုတ္ ေရာဂါကေန ေနာက္ဆုံး ကင္ဆာျဖစ္ကာ အသက္ဆုံးရႈံးတ့ဲအထိ အျဖစ္အမ်ားဆုံးကေတာ့ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ အသက္တိုတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကလည္း သင့္ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းအဂၤါေတြသာမက ေသြးေၾကာေတြကိုပါ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္ . . . ” ဆိုၿပီး Dr. Jani မွ ရွင္းျပထားပါတယ္။
အရက္ကို သင့္တင့္မွ်တစြာ ေသာက္ပါ။
အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္သုံးပါက ႏွလုံးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း (အထူးသျဖင့္ ဝိုင္နီကို) သင့္တင့္မွ်တစြာ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုအရ ပုံမွန္ေသာက္သုံးသူေတြဟာ (1209အမ်ိဳးသမီး – ၁ခြက္နဲ႕ အမ်ိဳးသား ၂ခြက္) ႏွလုံးေသြးေၾကာနဲ႕သက္ဆိုင္တ့ဲေရာဂါေတြကေန ေသဆုံးႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ “ ဝိုင္အနီမွာဆိုရင္ Resveratrol လို႕ေခၚတ့ဲ Antioxidant တစ္မ်ိဳး ပါဝင္ပါတယ္ . . .” ဆုိၿပီး Koma မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး Palinski Wade မွ “ ဝိုင္နီဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳရုံသာမက ႏွလုံးေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသားအေရ ဖူးေရာင္နီရဲျခင္းတို႕ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ . . .” ဆိုၿပီး ရွင္းျပခ့ဲပါတယ္။
လက္တေလာျပဳလုပ္ထားတ့ဲ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ငရုတ္သီးစားတ့ဲသူေတြဟာ မစားတ့ဲသူေတြထက္ (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ေသးဆုံးႏိုင္ေခ်နည္းတယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကိုေတာ့ သက္ေသျပထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ Palinski-Wade က “ ငရုတ္သီးဟာ ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့နည္းေစတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ငရုတ္သီးမွာပါဝင္တ့ဲ Capsaicin ဓာတ္ကို ေက်းဇူးတင္ရပါမယ္။ ေသြးဖိအား ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ျခင္းနဲ႕ စိတ္မမွန္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ငရုတ္သီးကို ပုံမွန္စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ ဒီလိုေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္ . . . ” ဆိုၿပီး ရွင္းျပထားပါတယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ရွိေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕က်န္းမာေရးအတြက္ အဆိုးဆုံး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္လို႕ စိတ္ဖိစီးမႈမျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႕က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈေတြကို ေရရွည္ ခံစားေနရတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္မတန္ဘဲ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျခားေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ စိတ္ဖိစီးေနသူေတြဟာ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႕ ေလျဖတ္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေေစႏိုင္ပါတယ္။ အ့ဲဒါေတြအျပင္ Dr. Jani က “ စိတ္ဖိစီးမႈေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းက အဆိပ္အေတာက္ေတြကို မ်ားျပားေစၿပီး ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္ေစျခင္း၊ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေန ပုံမွန္မရွိျခင္းနဲ႕ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ . . . ”ဆိုၿပီး ရွင္းျပထားပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမရွိသူေတြဟာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းနဲ႕ လူအမ်ားနဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါတယ္။
Previous အိမ်မွေးခွေးလေးများနှင့်ပက်သက်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိမှုအသစ်များ။
Next စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးလာမယ့် အချက် (၈) ချက်။
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်အစားဆုံးကတော့ ရာသီပေါ်ဒူးရင်းသီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အပူပိုင်းဒေသတွေအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာတို့မှာ …
Address: Room No. 57, 3rd Floor, Classic Strand Condo, Between Konezaytan Street & 27th Street, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar. Mobile : +959 799 530 897